"TURNING RIGHTS INTO REALITY"
Since the 2004 Tsunami we fight for the human rights of Burmese families and provide primary education and health care to underprivileged children in rural Thailand.
Foundation for Education and Developmentphilippe2020-07-10T17:16:36+07:00
Our main programs in Thailand are focused on our most important objectives: providing education andasafe environment for Burmese children, supporting and developing the Burmese migrant community, and providing health care and training to Burmese Families.
To improve better and safer school transportation for the migrant click for "See More"
ရွှေ့ပြောင်းကလေးငယ်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိသည့် ကျောင်းကားကြို/ပို့ ဝန်ဆောင်မှု အားမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းဝန်ထမ်းများမှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (ဂျပန်) ၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ကျောင်းကားတောင်းခံမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
children, FED met GGP staff regarding school buses requisition. ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 295287787909_10158570089072910
Our Mae Sot based "We Are Migrants" Vlog visits and shares the lives of migrants. In this video they will visitacucumber farm and interview the farmers. They even left withapresent! ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 10158556513487910
ဃ့ငဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ (Chikungunya; ချီကန်ဂန်ညာ) သည် chikungunya ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားပြီး ခြင်ကျားအကိုက်ခံရရာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အာရှ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပနှင့် အမေရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း (၆၀) ကျော်တွင် ဖြစ်ပွားသည်။ အာရှတိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နှင့် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တို့တွင် ဖြစ်ပွားမှု အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ခြင်ကျားပေါက်ဖွားမှု များပြားသော နေရာများတွင် ဆင်တုပ်ကွေး ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်သည်။
ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးသည် အခြေခံအားဖြင့် အေးဒီး(စ်) ခေါ် ခြင်ကျားများမှ ကူးစက်တတ်သည်။ ဤခြင်များသည် အများအားဖြင့် နေ့ပိုင်းတွင် ကိုက်တတ်သည်။လူသည် မူလအခြေခံ ရောဂါပိုး လက်ခံသူ ဖြစ်သော်လည်းလူမဟုတ်သော လူဝံ၊ မျောက် အစရှိသည့် အဆင့်မြင့် နို့တိုက်သတ္ထဝါများတွင်လည်း သယ်ဆောင်ပျံ့နှံ့နိုင်သည်။ ကူးစက်မှုခံရမှုသည် ခြင်တစ်ချက် အကိုက်ခံရခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
ဆင်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများအနေဖြင့် အခြားသူများထံသို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားခြင်း မရှိစေရန်အတွက် မိမိအား ခြင်ကိုက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးသော်လည်း နေအိမ်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ခြင်နှင့် ခြင်လောက်လန်း နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်နိုင်သည်။ ခြင်ကျားပေါက်ဖွားမှုမရှိလျှင် ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါသာမက ဇီကာရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတို့လည်း မဖြစ်ပွားနိုင်ပါ။ ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 10158551532577910
On behalf of Foundation for Education and Development (FED), Click for "See More"......
COVID - 19 ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
စဥ်များ၌ မေတ္တာ၊ စာဂ၊ ဝိရိယတို့ကို အခြေခံ၍ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းအတွက် အမျိုးသားအဆင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးဆောင်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာအား တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်မောင်မှ ယနေ့နံနက်က
တနင်္သာရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့ လူမှု့ဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန ရုံး(၄-မိုင် Shelter)၌ ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း (FED) ၏ ကော့သောင်းရုံးတာဝန်ခံ ဦးမိုးဝေအား ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
U Moe Wai (an In-charge of FED's Kawthaung branch office) receivedacertificate of honor for collaboration in COVID- 19 prevention, controlling and treatment process, from Chief Minister of Tanintahyi Division U Myint Maung, awarded by the state counselor Daw Aung San Suu Kyi, who is also taking responsibility as the chairperson of National Volunteer Leadership Team. The certificate awarding ceremony was held this morning at the Department of Rehabilitation under the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, and attended by relevant government officials, NGOs staff, CBOs staff, and residents of Kawthaung Township. ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 295287787909_10158545946842910